/blog/gallery/Oxymetholone na-ekwu: The Ultimate Guide of Oxymetholone (Anadrol)
Ihe na 01 / 08 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Ọ bụghị ihe ijuanya na ozubuilding bụ otu n'ime ihe ndị siri ike nke mmadụ nwere ike itinye na ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na emee ya n'ụzọ ziri ezi na ngwaahịa, ọzụzụ, na nri, ọ na-akwụghachi mmadụ ụgwọ ọrụ abụọ. N'ikwu eziokwu, ibuli igwe na ọzụzụ naanị nwere ike ị gaghị enye gị ezigbo nsonaazụ dị ka ọtụtụ ndị na-eche. Oxymetholone (Anadrol) bụ otu n'ime ngwaahịa ndị ị nwere ike iji gbanwee njem gị na-eme ka ọ bụrụ ahụmahụ kachasị afọ ojuju ná ndụ gị.
Ihe ọzọ bụ na ka ị ka dị afọ, mmepụta nke hormonụ ahụ dịka Testosterone na-ebelata ma ọ bụ naanị gị ka ị na-adabere na nsụgharị ya .Ọnadrol ọrụ dịka Testosterone na ahụ na ohere ọ bụ bụ na ọ ga-enyekwu uru karịa nke ikpeazụ. Ọ bụghị naanị na ọ ga - eme ka ị hụ ọganihu n'ahụ gị ma ọ bụ nke kachasị mkpa ọ ga - eme ka i merie ihe ọ bụla nwere ike ịme gị nsogbu na njem a.
Ọ bụrụ na ị na-atụle ibi ndụ ndụ dị egwu, ọ bụrụ na ị na-atụle Anadrol n'ihi na ọ ga-enyere gị aka ime ka ike gị na ike gị. Ka ọ dị ugbu a ịchọrọ ịmatakwu banyere Oxymetholone (Anadrol) (434-07-1). Ị ga-enweta ihe niile gbasara ya na nkeji.
Kedu ihe bụ Oxymetholone (Anadrol)?
Oxymetholone bụ aha aha Anadrol 50 bụ nke a maara nke ọma na steroid steroid androgenic. Ịjụ onwe gị ihe "50" pụtara? Ọ na-egosi na igwe ọka na steroid a na-edozi ya. Lee ụfọdụ n'ime aha ndị ọzọ maka Anadrol;
Na 1960s ụfọdụ ụlọ ọrụ ọgwụ na-emepụta Anadrol. Ụlọ ọrụ ndị a gụnyere Zoltan, Syntex, na Park Davis. N'oge gara aga, a na-eji ya eme ka mmepụta ọbara ọbara ọbara na ndị mmadụ na-arịa ọrịa anaemia. A na-ejikwa ya eme ka agụụ gụkwuo ya, nyere aka n'ịkpụzi ọkpụkpụ na ịlụ ọgụ na-egbute ọrịa. Nyocha a mere n'oge ndị ahụ banyere ndị ọrịa nwere ọrịa AIDS ruo izu iri atọ na ndị ozu ha na-akpata nsị anụ ahụ gosiri na onye steroid a nyere ha aka inweta ihe dị ka kilogram asatọ na njedebe oge ọmụmụ.
Ọ bụ mgbe nke ahụ gasịrị na ndị mmadụ ghọtara na enwere ike iji ya mee ihe. Ndị na-arụ ọrụ n'ime ụlọ malitere iji ya mezuo oke akwara. Taa Oxymetholone (Anadrol) (CAS 434-07-1) a na-ewere ya dị ka otu n'ime ọgwụ ndị anabolic siri ike dị n'ahịa. Ọ bụghị ihe ijuanya na ọ nwere ike inyere mmadụ aka ịmepụta nnukwu akwara ugboro abụọ ka ngwa ngwa ndị ọzọ nwere ike. Nkọwa ya na etrogenic ya bụ 350: 55. Onye ọ bụla nke na-arụ ọrụ na ya nwere ike igosi ya na steroid a bụ morerogenic karịa ihe dị na onu ogugu.
Ihe ọzọ nke na-eme ka ọ bụrụ ihe steroid zuru oke n'etiti ọtụtụ ndị bụ eziokwu na a pụrụ iji ọnụ kwuo ya. Ọ bụ n'ihi na ọ bụ steroid 17AA nke pụtara na ọ gbanwere ya na 17th Atọ nwere ike iji ọnụ kwuo ya.
Oxymetholone bụ ezigbo steroid nke anabolic nke nwere mmetụta dị ike na ọgwụ a na-eme atụmatụ ịbụ ugboro atọ karịa ike testosterone. Kedu ihe ị ga - achọ maka steroid nke anabolic?
Oxymetholone (Anadrol) usoro nke ihe
Oxymetholone bụ mmepụta nke testosterone nke nwere mmepụta ihe nke nwere akwara anabolic na-arụ ọrụ androgenic. Ọ na-arụ ọrụ site n'ijikọta ndị na-anabata ụbụrụ nke na-eto eto na cytoplasmic n'ime anụ ahụ na akụkụ ndị na-eme androgen anabata iji mepụta mgbagwoju hormone-receptor. Ihe mgbagwoju hormone-receptor ahụ jikọtara ya na DNA si otú a na-akwalite transcript DNA na nhazi mRNA nke gbanwere njikọ nke protein.
Tụkwasị na nke ahụ, Oxymetholone na-emetụta mmetụta ahụ anabolic na akwara skeletal na ọkpụkpụ ka ọ na-agba ọsọ erythropoiesis. Nakwa, ọgwụ a na-arụ ọrụ na-emepụta ọgwụ na ahụ site n'ịzụlite ogo nke erythropoietin nke na-enye aka emepụta mkpụrụ ndụ ọbara uhie. Ọ na-eme ka ahụ dịkwuo mma na-edozi ahụ na site n'ịkwalite nkwụsị mmiri.
Kedu ihe Oxymetholone ji mee ihe na bodybuilding?
Oxymetholone nwere otutu uru nke na-ewetara ya na tebụl. Lee ụfọdụ n'ime ha;
Ọ na-eme ka protein njikọ- Ọganihu nke akwara bụ ihe sitere na njikọ protein dịka ọ bụ isi ụlọ na-ahụ n'ahụ ahụ. Ozugbo ị na-arụ ọrụ n'ebe ahụ, ngwongwo ngwongwo muscle nke na-eme ka uru ahụ na-agbanwe. Maka oke nke uru gị iji mụbaa, ahụ ga-enwe njikọ protein karịa ụda ya, site na Oxymetholone na-akwado njikọ protein, enwere ike ịkpụ ụzụ.
Ọ na-emepụta mkpụrụ ndụ ọbara uhie- Mkpụrụ ndụ ọbara uhie na - achọpụta na akwara gị dị mma nke ikuku oxygen, nke a mere ka ike gwụrụ na mmiri. Ya mere, ị ga-enwe ike ịrụ ọrụ ndị ka mma n'enweghị nhụjuanya nke ike gabiga ókè nke a na-eme ka uru ahụ dị mma karị. Onye na-arụ ọrụ nke ọma na-erite uru site n'inwekwu ntachi obi n'ihi na ọ / ọ ga-enwe ike ịzụ ọzụzụ n'ime izu.
Anadrol na-eme ka njigide nitrogen dị- Onye na-agwọ ọrịa a nwere ike ime ka nitrogen dị arọ nke ahụ gị nwere ike ịchekwa. Ihe bara uru na nke a bụ na a ga-enyefekwu ihe oriri na ahụ ike gị nke a na-eduga n'ọganihu ha na mgbake dị mma mgbe arụchara ọrụ.
Ọ na-echekwa uru ahụ mgbe ọ na-egbu- Ọ dịghị onye na-achọ ịkwụsị ahụ ike ha rụworo ọrụ n'oge a na-egbu oge. Ihe Anadrol mere bụ na ọ na-awakpo ma na-ebibi anụ ahụ dị abụba na-enweghị nbibi. Ozugbo a na-agbaji abụba ndị dị gburugburu akwara ahụ, akwara ahụ ga-elezi anya ma daa. Maka ihe siri ike ma dịwanye njọ Oxymetholone (Anadrol) 434-07-1.
Ọ na-agụ agụụ-Onye ọkpụkpụ na-achọ iji calorie buru ibu ka ahụ nwee ike ịzụlite akwara. Ma nsogbu ahụ na-abata mgbe mmadụ na-enwe agụụ na-enweghị ihe ọ ga-eme iji were calorie dị mkpa. Oxymetholone ga-enye gị afọ ojuju zuru ezu nke ga-eme ka calorie gị dịkwuo mma.
Na-amụba ike ụzọ- Anadrol ga-eme ka ikike gị dịkwuo elu, uru nke kachasị mma maka ihe dị elu.
Ihe dị mkpa na-eduba n'ọganihu nke ike mmadụ- Oxymetholone na-eme ka ike dịkwuo mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ga-enyere gị aka ịmekwu ihe na ubu ka ị na-agbanye aka na egwu. N'ịga site na nyocha ya, a na-akọ ọgwụ a iji mee ka ike dịkwuo n'iji ya eme ihe.
Ọ na-akwalite nkwalite ahụ ike- Ọtụtụ bodybuilders agbalịwo ịnweta ahụ ike n'enweghị uru ọ bụla. Na Oxymetholone, ị ga-agbasi mbọ ike. Ozugbo ịmalite ịmịpụta mkpụrụ ọgwụ ndị a, ị nwere ike ịtụ anya ịnweta ahụ ike na ihe na-erughị ọnwa abụọ. Akụkụ kachasị mma maka ịṅụ ọgwụ a bụ na ị gaghị echere ruo ogologo oge ịmalite ịhụ na ahụ gị na-ebuwanye ibu. N'ime izu nke abụọ, ị ga-enwe ike ịhụ ihe dị iche.
Ọ na-eme ngwa ngwa na nke a pụta- Ọ bụrụ na ị gaghị adị mma n'inwe ndidi, ị ga-aghọta eziokwu ahụ na steroid a na-enye nsonaazụ zuru oke n'ime obere oge. Ọ ga-achọpụta na ị bụ ahụ gị na-ahapụ gị ka ị rụzuo ihe mgbaru ọsọ ahụ gị n'ime izu asatọ.
Mee ka arụmọrụ dị mma-Ndị ọzọ karịa akwara ụlọ, Anadrol na-enye otu nnukwu mmụba na arụmọrụ. N'ihi ya, ndị ozu na ndị na-eme egwuregwu nwere ike ịgbake ngwa ngwa site na ọzụzụ. N'ihi nke a, ha nwere ike ịmalite ịmị ike karia ugboro ugboro.
Na-enyere aka uru- Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ahụ gị ka ọ dịkwuo mma, ọbụnakwa bụrụ ihe na-adọrọ mmasị mgbe ahụ, ị ​​ga-atụle iji Oxymetholone maka uru bara uru. Ọtụtụ ndị na-eji ya ekwuola na ọ nyeworo ha aka inweta uru uru na mberede. Ịtụkwasị 20-30 pound n'ime izu 4-6 abughi egwuregwu, na Anadrol egosila na ị ga-anapụta ọbụna karịa nke ahụ.
Na-amụba ume- Ịnwe ike igwu egwu na mgbatị gị ma ọ bụ ọzụzụ ọzụzụ maka oge ndị toro ogologo bụ ihe onye ọ bụla na-achọsi ike na-achọ. Otu n'ime Oxymetholone rụpụtara na ọ na - ewusi ume gị na - enye gị ohere ịzụ ahụ gị ma ọ bụrụhaala na ịchọrọ ịmalite imezu ihe kachasị elu.
Soothes ihe mgbu- Mgbu ndị a nwere ike ime ka onye ịkpọasị na-arụ ọrụ ma ọ bụ ezie na Anadrol maara ike ịmepụta ike na ike, ọ na-arụkwa ọrụ dị oke mkpa n'ịnye nkwonkwo a na-eme ka ọ dị otú ahụ na-ebelata nkwonkwo nkwonkwo. Ị gaghị enwe ihe ngọpụ ọ bụla na ị gaghị ebuli ihe dị ka oge ọ bụla ị chọrọ.
Oxymetholone (Anadrol) usoro onunu ogwu
Naanị Anadrol 50 anaghị ekwe gị nkwa. Ịkwesịrị iji usoro ọgwụgwọ ziri ezi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta nsonaazụ dị mma. Nke ọzọ, ịnweta usoro ziri ezi na-echebe gị pụọ na mmetụta ndị nwere mmetụta na-ejikọta na ịme ihe na-ezighị ezi Anadrol usoro onunu ogwu. Ka o sina dị, Anadrol usoro onu ogugu di iche site na otu onye gaa na nke ozo dabere na otu ihe mgbaru ọsọ ya.
Dị ka ihe megidere ụfọdụ ihe mgbakwunye ntinye nke ụda nke ị na-agbanwe n'oge dị iche iche nke usoro ahụ, Anadrol nwere usoro nhazi nke 50mg kwa ụbọchị. Ndị mbido nwere ike ịmalite site na dose dị ala dịka 25mg-50mg, ọ bụrụ na ahụ ha nwere ike ịnagide ọgwụ ahụ, ha nwere ike imezi ihe oriri.
Ọtụtụ ndị na-echekarị na ọgwụ ọjọọ a na-eche na ọ ga-eme ka agụụ gụkwuo ha. Otú ọ dị, nke a abụghị ihe gbasara Anadrol. Ọ na-eme ihe dị na ya n'ihi na ọ na - egbochi agụụ mmadụ mgbe ọ na - agabiga. Ọzọkwa, a na-atụ aro na onye anaghị ewere usoro ọgwụ ọjọọ dị elu n'ihi na ọ nwere ike ibute nsogbu ndị siri ike.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịfụkwuo ntakịrị, ị nwere ike ịmalite ụbụrụ gị na 100mgs. Otú ọ dị, ọ gwara gị ka ị mee nke a naanị ma ọ bụrụ na ahụ gị nwere ike ịnabata ya. Ehiela ihe karịrị 150mgs n'ihi na nke a agaghị adị mma maka imeju gị. O nwekwara ike iduga Mbelata ọchịchọ gị, nke a ga-apụta na ị gaghị enwe ike iri nri dị ka ị na-eji eme ihe ugbu a iji mebie mmepe gị.
Oxymetholone (Anadrol) okirikiri na nchịkọta
Oxymetholone (Anadrol) okirikiri
Ọtụtụ bodybuilders na-ahọrọ iji Anadrol mee ihe na mgbakọ ha na ebumnuche nke ịkwalite arụmọrụ ha. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime usoro nke ọtụtụ n'ime ha na-ahọrọ;
1. N'ihi na beginners
Ọ na-ewe izu iri na abụọ.
Izu 1 ruo izu 6- Were 25-50mg nke Anadrol kwa ụbọchị
Izu 1 ruo izu 12- Were 300-500mg nke Testosterone Enanthate kwa izu.
Nke a bụ otu n'ime ndị enyi Anadrol nke na-amalite ịmalite ịmalite ebe ọ bụ ebe Testosterone bụ akụkụ nke ya na na akwa dose nke ga-ebute mkpa anabolic utịp. N'aka nke ọzọ, Anadrol na-emekarị ka a gwa onye mbido ka ọ gaa.
N'oge a, ọ dị mma na ị na-ewere SERM dị ka Nolvadex ma ọ bụ ihe ọ bụla aromatase inhibitor n'ihi ọdịdị estrogenic dị elu nke nchịkọta a nwere. Maka onye ọ bụla na-amalite na-achọ ịbawanye elu, nke a bụ ihe kachasị mma Anadrol ga-aga.
2. Maka ndị ọrụ ọrụ n'etiti
Week1 ruo izu 6- Were 50mg nke Anadrol kwa ụbọchị.
Week1 ruo izu 12- Were 400mg nke Deca Durabolin (Nandrolone Decanoate) kwa izu.
Nakwa, were 100mg nke testosterone Enanthate kwa izu.
Dịka ị ghọtara, enwere mgbanwe ole na ole n'usoro a ma e jiri ya tụnyere nke mbụ. Ọkpụkpụ a abụghị isi anabolic, ihe bụ isi kpatara nke a bụ iji belata mmụba nke arụ ọrụ estrogenic n'oge niile mgbe ọ na-eji ọgwụ dị ka Anadrol.
Deca Durabolin na-abata na nke a mgbe mmadụ kwụsịrị iji Anadrol eme ihe n'ihi na ọ bụ ngosipụta anabolic. Na nke a Anadrol, a na-ebelata usoro onu ogwu nke 50-100 mg kwa ụbọchị na-ewere 50 mg kwa ụbọchị. Ọ bụ n'ihi na ọgwụ a bụ nnukwu anabolic. Ya mere, ọ dịghị mkpa inwe mmụba na usoro Anadrol. Maka izuzu ma ọ bụ ike inweta, otu usoro nke 50mg karịrị oke maka onye ọrụ nke ozo.
3. Maka ndị ọrụ dị elu
Ọ na-ewe izu asatọ.
Izu 1to izu 8- 100mg nke Annrol kwa ụbọchị
Were 25MG nke Testosterone Propionate kwa ụbọchị ọ bụla na 100mg kwa izu
Were 100mg Trenbolone Acetate kwa ụbọchị ọ bụla na 400mg kwa izu.
Ihe dị iche nke usoro a dị elu na ndị ọzọ bụ na ọ na-ewe oge dị mkpirikpi. Ọ na-agụnye ndị na-arịa steroid ndị bụ obere esters dị ka Trenbolone Acetate na Testosterone Propionate. Ojiji a na-ejedebe na izu isii, ọ bụghị ihe amamihe dị na ya iji ya maka oge gbatịkwuru karị n'ihi oke usoro nke 100mg kwa ụbọchị.
Akụkụ kachasị mma banyere usoro Anadrol dị elu bụ na ọ nwere ike inye ike dị egwu na ịba uru ọgaranya karịsịa ma ọ bụrụ na ejikọta ya na Trenbolone Acetate.
A na-atụgharị usoro a naanị maka ndị ọrụ toro eto n'ihi na ọ nwere ike iduga onye na - enweta ike na nha karịa ya na - ebute ndị ọzọ ọrụ.
Oxymetholone (Anadrol) nchịkọta
Anadrol 50 na-enye akwa dị ka ị nwere ike ịhọrọ iji ya na ya ma ọ bụ dochie ya na ndị ọzọ steroid.
Otu Anadrol na okirikiri- Na nke a, ị ga-enweta nsonaazụ dị mma. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ikpebi ịtụkọta, ọ dị mma ịhọrọ steroid ị na-etinye ya na iji zere ịbawanye mmetụta ndị dị na ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwado ụzọ kasị mma, lee ụzọ ndị ị nwere ike isi mee nke ahụ;
Jiri anabolics dị nwayọọ-Ọ dị mma na ị na-eji ya na steroid anabolic dị nwayọọ dịka SARMS, Equipoise, Primobolan, na Deca Durabolin.
Ejila ọgwụ na-emepụta ihe na-eme ka gị na steeti na-emepụta ihe na -Mgbe ị na-atụ ya na steroid dị ka Testosterone ma ọ bụ Trenbolone, ị kwesịrị izere ịnara anadrol usoro onu ogwu karịa 200mg.
Zere igbochi ya na ihe omume DHT- Ịnagide Anadrol na ndị na-agwọ ọrịa dị ka Masteron na Winstrol ga-eme ihe dị njọ karịa ezi. Ị nwere ike nweta ihe ị chọrọ, ma mmetụta ndị ọ na-abịa na-enweghị ike ịnwụ. N'ọnọdụ ebe ndị mmadụ nọ na Winstrol, enwere akụkọ banyere nnukwu ntutu isi.
Zere igbochi ya na steroid ndị ọzọ na-emerụ ahụ-Zere igbochi na steroid n'ihi na ha nwere ike ịkpata nsogbu imeju dika jaundice.
Ejila oge dị ogologo-Ogologo oge maka nchịkọta bụ izu anọ, ọ dị mma ịmara na ogologo oge nke ojiji na nke dị elu ka ị na-eme, otú ahụ ka mmetụta ndị ọzọ na-esiwanye njọ.
Ya mere, ị ga - eji nchịkọta Oxymetholone mee ihe n'amaghị ama n'amaghị ọgwụ ọ bụla.
N'ihi na Anadrol bụ otu n'ime ọgwụ ndị anabolic kachasị ike n'ahịa, ọ dị mma ịnweta usoro ọgwụgwọ dị mma nke na-etinye n'ọnọdụ. Nzube maka nke a bụ ịhapụ gị ka ị nọgide na-enweta uru gị. Ọ gaghị adịrị mma ịnwụfu ihe niile i nwetachara mgbe ị gachara, ọ ga - abụ? Tụkwasị na nke a, PCT enyere gị aka izere mmetụta ndị nwere ike ịkpata site na mkpochapụ nke mmepụta Testosterone.
Ebe ọ bụ na Anadrol nwere obere obere ndụ na ọ bụ ester dị mkpirikpi, ị ga-amalite PCT ụbọchị atọ mgbe ị gụsịrị ọgwụ ikpeazụ gị ma ọ bụrụ na ị na-eji ya naanị. Ọ bụrụ na ị na-atụ ya na steroid ọ bụla bụ ogologo ester, ị ga-amalite PCT 14-18 ụbọchị mgbe ị na-ewere usoro ikpeazụ gị. Nolvadex ma ọ bụ Clomid ga - enyere gị aka ịghapụta mmepụta nke mmepụta nke testosterone n'ahụ gị. Nke a bụ ụzọ iji ọgwụ ọjọọ eme ihe;
izu Nolvadex / kwa ụbọchị Na-ekpuchi kwa ụbọchị
Oxymetholone (Anadrol) mmetụta utịp
The Anadrol nsonaazụ dị mma, ma mgbe ụfọdụ, ha nwere ike ịbịakwute mmetụta ndị na-adịghị mma. Imirikiti ihe ndị na-akpata Anadrol na-edozi ma ga-agafe ozugbo ị na-eme ha.
Chọọ dọkịta ahụ ma ọ bụrụ na ị nweta ihe ọ bụla n'ime ihe ịrịba ama ndị a n'ihi mmeghachi omume na-adọrọ mmasị;
Ọnyà nke akpịrị, ire, egbugbere ọnụ, na ihu
Anadrol mmetụta na-akpata site n'iji oge ojiji mee ihe na-eme ka ọbara na-agbapụta ọbara na splin ma ọ bụ imeju. Ọ pụkwara ịkpata ụbụrụ imeju.
Kpọọ dọkịta ọ bụrụ na i nwere nke ọ bụla n'ime ndị a;
Jaundice-odoing nke anya na akpụkpọ.
Nsogbu afo afo elu
Mgbapu ụkwụ na aka
Mgbanwe na agba akpụkpọ
Ogbugba iwe na ara
Ọkpụkpụ (ọgbụgba na-agba ọbara ma ọ bụ ọbara ọgbụgba) ma ọ bụ ọnyá dị mfe, ọbara ọgbụgba na-enweghị ịkwụsị
Enwere mmasị na inwe mmekọahụ, na-ebelata ụdị mmanụ a na-emepụta na ejaculation, nsogbu nwere orgasm na adịghị ike
Na-eche ihe mgbu na mpempe akwụkwọ ozugbo ọ na-eguzobe
Mgbagwoju anya ma ọ bụ ihe mgbu na-egbu mgbu
Ndị inyom na-eji Oxymetholone nwere ike ịzụlite njirimara nwoke ma kwesịrị, ya mere, kwụsịrị iji ya mee ihe ozugbo ha mere ma ọ bụ chọọ ndụmọdụ nke dọkịta. Ha gụnyere;
Mbelata ma ọ bụ mụbaa mmasị na mmekọahụ
Mgbanwe na oge nke ịhụ nsọ
Ịhụbawanye nke njedebe
Ịdị arọ ihu
Uto nke ntutu isi di n'obi
Enwekwu olu ma ọ bụ olu
Mmetụta mmetụta nkịtị nke na-emetụta ma nwoke ma nwanyị gụnyere;
Nsogbu ihi ụra (Ahụhụ)
Nwee obi ụtọ ma ọ bụ jụụ
Ọkpụkpụ ara na nro (ma nwoke ma nwanyị)
Oxymetholone (Anadrol) ọ dị mma iji?
Anadrol dị mma? Ajụjụ a na-emetụta ọtụtụ ndị nwere mmasị ịṅụ ọgwụ a. Anadrol 50 dị mma ma ọ bụrụ na eji ya n'ụzọ ziri ezi, mana ọ gaghị abụ ma ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ site na ọnọdụ ọ bụla ndị a;
Ọ bụrụ na ị na-aṅụ ọgwụ ọjọọ ọ bụla dị ka Jantoven, Coumadin, Warfarin
Ọkpụkpụ ma ọ bụ nwee ọbara na-ejikọta nsogbu
Cholesterol dị elu ma ọ bụ triglycerides
Ọrịa akwara ọbara
Ọrịa obi, ịda mbà n'obi
Umeji ma obu akụrụ
Ọrịa ara nwa nwere ọtụtụ calcium n'ime ọbara
Anadrol adịghị mma maka gị ma ọ bụrụ na ị dị ime. Ọ nwere ike imerụ nwa gị a mụrụ amụ na-ebute nsogbu nwa. Ọ bụrụ na ị dị ime ka ị na-eji ọgwụ a eme ihe, hụ dọkịta ozugbo. A na-adụkwa gị ọdụ ka ị jiri ụzọ akara ọmụmụ dị irè mgbe ị na-eji ọgwụ a eme ihe.
Nri a nwere ike igbanwe omumu maka umu nwanyi na ndi nwoke, ya mere, kwesiri iji nlezianya buru ya.
Nnyocha na ma ọ na-agafe nwa na-enye ara ara site na mmiri ara ara ka emebeghị, ọ dịghị ama ma ọ nwere ike ịkpata nsogbu. Mgbe ị na-eji ọgwụ a egbochi ịme nwa gị obere.
Ndị dị afọ iri na asatọ ekwesịghị iji ọgwụ a mee ihe n'ihi na ọ nwere ike imetụta ọkpụkpụ ọkpụkpụ ha.
ịzụta Anadrol site na saịtị anyị ma nweta ya. Nke a bụ otu esi esi n'aka anyị;
Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na email anyị, onye nnọchiteanya ndị ọrụ ahịa, online Skype ma ọ bụ site na usoro ịjụ email anyị.
Iji mee ka anyị nwee ike ijere gị ozi ọma, nye ihe ọmụma niile dị mkpa banyere iwu, ya bụ, adreesị gị na ọtụtụ ịchọrọ ịzụta.
Onye na-ahụ maka ndị ahịa anyị ga-alaghachikwute gị ma nye gị ụzọ ị ga-esi na-enyefe, ụbọchị nbịaru atụmatụ (ETA), nọmba nchịkọta akụkọ, nkọwa na usoro ịkwụ ụgwọ kachasị mma.
Ozugbo ị kwụrụ ụgwọ maka iwu gị, a na-ezitere gị ihe ndị ahụ n'ime awa iri na abụọ ọzọ (Nke a bụ maka ihe ọ bụla dị n'elu kilogram iri).
Ọ bụ Oxymetholone (Anadrol) na-akwadoghị?
Iwu iwu nke iji, ire na ịzụta Oxymetholone dịgasị site n'otu mba ruo ná mba. Dịka ọmụmaatụ, na United Kingdom, Canada, na United States, a na-eji ọgwụ a eme ihe, ma a machibidoro ịzụ ahịa iwu na-akwadoghị. Iji zere ịchọta onwe gị na nsogbu, chọpụta ma mba gị ọ na-enye ohere ka Anadrol jiri ya.
N'ọtụtụ mba, ịnwere ike ịnweta ya site na ndenye ọgwụ mana iji zere nsogbu ahụ ị nwere ike nweta ya na ntaneti.
Ebee ka m nwere ike inweta Oxymetholone (Anadrol)?
Ka ị na-abanye bodybuilding, ị nwere ike chọpụta na ogo nke uru gị adịghị aba afọ ojuju. Ọbụna mgbe ịmechara ihe niile i nwere ike ime, ị nwere ike ịda mbà n'obi ịmara na ị gaghị esi ebe ị chọrọ. Na oge ndị ọzọ, ị nwere ike ịhụ na e nwere ọtụtụ abụba na-ewuli elu n'ime ahụ gị. Ụdị abụba dị otú ahụ ga-ezochi ahụ ike gị, ma ị nwere ike ịhụ na ị na-ele anya ihe niile.
Mgbe n'ọnọdụ dị otú a, echegbula onwe gị na-eche ihe ọzọ. Ụbọchị mgbe ị ga-ajụ onye ọ bụla na mgbatị ahụ maka ụzọ ị ga-esi rụọ akwara gị adịla anya. N'oge a, ị na-egwu na ịntanetị, ị nwere ike ịchọta ebe niile na-ere ndị steroid online. Mana olee otu ị ga esi amata ebe kachasị mma ịzụta?
Dịka ọ bụla steroid ị zụrụ, ọ dị mkpa ka ị zụta Anadrol 50 si na a pụrụ ịdabere na isi iyi. N'ebe ahụ, i nwere ike ijide n'aka na ị ga-enweta ego na ogo Oxymetholone kasị mma. Site n'ịntanetị nwere ọtụtụ scammers na aha ndị na-ere ákwà, ị nwere ike ịda n'ihi na saịtị na-ere ihe na-adịghị ọcha ma ọ bụ na-emerụ steroid. Ụfọdụ steroid nwere ike ghara ịnweta nkwa ọbụla, ma ha nwere ike ịkwụsị na-emetụta ahụ gị n'ụzọ na-adịghị mma. Ezigbo Oxymetholone tupu na mgbe ọ pụtachara dịka ụwa abụọ dị iche iche, nke ahụ kwesịkwara ịbụ ikpe ahụ ozugbo ị malitere iji steroid a.
Na saịtị anyị AASraw.com, ị ga-enwe ike ịchọta Anadrol nke dị ọcha na dị ọcha. Ego oxymethone anyị bụ enyi na-akpa n'akpa n'akpa uwe, ya na ezi omume ya, obi sie gị ike na ị ga-enweta ezigbo Anadrol na nsonaazụ Anadrol kachasị. Nye anyị iwu taa ma gbanwee ahụ gị na ihe ịchọrọ ka ọ bụrụ.
Saartok T, Dahlberg E, Gustafsson JA (1984). "Njikọ dịkwuo ejikọta nke anabolic-androgenic steroid: iji tụnyere njide aka nke ndị na-anabata etrogen na akwara na na prostate, nakwa na hormone-ejikọta globulin". Ọgwụgwụ. 114(6): 2100-6.
Pavlatos AM, Fultz O, Monberg MJ, Vootkur A, Pharmd (2001). "Nyochaa nke oxymetholone: ​​ihe na-akpata 17alpha-alkylated anabolic-androgenic steroid". Clin Ther. 23(6): 789-801.
Zderic, John A .; Carpio, Humberto; Ringold, HJ (January 1959). "Steroid. CVI. Njikọ nke 7β-Methyl Hormone Analogs ". Akwụkwọ akụkọ nke American Chemical Society. 81(2): 432-436.
Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Banyere Dianabol Powder Maka Sale	Ihe Nlekọta 15 Winstrol kachasị mkpa Ị Kwesịrị Ịmara Tupu Ịzụta Winstrol Online